လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြစ်မှုထင်ရှားစွာထိတွေ့ခြင်းသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအားတူညီသောသက်ရောက်မှုရှိပါသလား။ (၂၀၀၇) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
J ကိုလိင် Res ။ 2007 May;44(2):111-21.
Gillath အို1, Mikulincer M က, Birnbaum GE, မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် PR စနစ်.
သုံးလေ့လာမှုများတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဖို့အကျဉ်းထိတွေ့အောက်ပါလိင်စိတ်နိုးထ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်သွယ်ဝိုက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုစူးစမ်း။ လေ့လာမှု 1 တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားနေပုံ subliminal ထိတွေ့အောက်ပါလိင်စိတ်နိုးထ၏အစီရင်ခံစာများအကဲဖြတ်သွားရမည်အကြောင်း, လေ့လာရေး2နှင့်3တစ်ဦးလတ်တရားစီရင်ခြင်းကိုတာဝန်နှင့်တစ်ဦး lexical ဆုံးဖြတ်ချက်တာဝန်နှင့်အတူအကဲဖြတ်လိင်-related အတှေးအများအသုံးပြုနိုင်စွမ်းအပေါ်တူညီတဲ့ Prime လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
သူမသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်တူညီသောမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ကိုင်မှုသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးတွင်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအတွေးအခေါ်များကိုပိုမိုရရှိစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာချုပ်ကိုင်မှုသည်အမျိုးသမီးများအားလိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်မှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ သို့သော်ရလဒ်ကိုအတန်ငယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်တွေ့မြင်စေသည်။